manicure set Suppliers and Factory - China manicure set Manufacturers
17 na 1 akpụkpọ anụ manicure kit grooming manicure set
1. The stylishly haziri ejiji ejiji Ntu Clippers Set, na-akwado nnukwu mkpokọta.Na Stock/ Fast Dispatch
2. Ọkachamara Ntu Clippers Set, ọ bụghị naanị mara mma, kamakwa ọ bara uru.Mere nke igwe anaghị agba nchara dị elu, ihe eji eme akpụkpọ anụ, dabara maka onye ọ bụla. Kwesịrị ekwesị maka ndị ọrụ pedicure manicure ọkachamara.
3. Ejiji ntu cutter set mere nke High-edu Material, na Ntu ngwá ọrụ bụ nkecha, inogide na ala na aka.
4. Nke a ntu Clippers Kit gụnyere ihe niile ịchọrọ iji maka manicure na pedicure kwa ụbọchị. Ngwá ọrụ zuru ezu, dị mfe iji.
5. Kwesịrị ekwesị maka iji ọkachamara mee ihe ma ọ bụ iji ụlọ eme ihe, Ụlọ Mmanya Mma, ụlọ ahịa manicure, pedicure shop, etc.and for the people including novice,Nabata customization.
6.Exterior nke a na-eji ojii rectangle PU akpụkpọ anụ na-ele anya pụrụ iche na-ejupụta na ihe omimi.
7.Made nke nchara dị elu, kwe ka Sterilization Safe, gbochie corrosion na belata ihe ize ndụ nke ọrịa.
8.MUTIL-FUNCTIONAL: Ịkpụcha ahụ, Pedicuring, Anti-Acne, Exfoliating, Nkuanya Ịkpụzi.
9. Ọ dị mfe iburu maka njem ụlọ.
15pcs Ọkachamara Manicure Set Pedicure ntu Kit igwe anaghị agba nchara Nlekọta Ngwá Ọrụ Nlekọta
* Ihe kacha mma: faịlụ ntu anyị bụ nke emery kwalitere, nke dị mma na gburugburu ebe obibi,
na-enye gị ahụmihe ntu na-eme nke ọma.
* Ntucha dị oke mkpa: faịlụ ntu ndị a dị fechaa dị mfe ma dịkwa mma iji.Naanị tinye nrụgide ọkụ ma ị nwere ike ịhụ nsonaazụ ozugbo, mana ha agaghị ehulata!
* bọọdụ Emery nwere akụkụ abụọ: Ntu ntu ndị a dabara adaba maka mbọ aka, mbọ aka, mbọ eke, mbọ acrylic, ụgha.
mbọ na ihe ndị ọzọ na mbadamba emery nwere akụkụ abụọ.
* Kwesịrị ekwesị maka Salon na Ụlọ: Faịlụ ntu ndị a dị mma na-enye gị ezigbo ngwọta iji dowe ọmarịcha acrylic gị, mbọ eke na ụgha.Ị nwere ike ịnwe n'ụlọ ahịa ndị ọkachamara na nka ntu DIY n'ụlọ.
IZLA 7 na 1 Igwe anaghị agba nchara Portable Manicure Set Manicure & Pedicure Kits Professional Nail Clippers Kit Ngwa Nlekọta Pedicure maka njem ma ọ bụ ụlọ
ỌTỤTỤ Ọrụ 7 na 1 GOOMING KIT: Ọrụ manicure set na-adabere na mbọ ịkpụcha mbọ, a na-emepụta ngwa ọ bụla nke ọma ma nwee ike gboo mkpa nlekọta gị niile na ndụ kwa ụbọchị, otu setịpụrụ n'aka, na-ebi n'udo.
100% Igwe anaghị agba nchara High Quality Tools: Manicure na Pedicure tools bụ nke igwe anaghị agba nchara, setịpụ a siri ike ma wuo ya ka ọ dịgidere, nke na-enye ohere maka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, na-egbochi corrosion ma belata ihe ize ndụ nke ọrịa.
Akpa akpụkpọ anụ nwere ike ibugharị njem: You chọrọ ịnwe setịpụ manicure nke na-anaghị etinye ohere mgbe ị na-eme njem ma ọ bụ n'ụlọ?IZLA pedicure set mere na a protable size, ị nwere ike tinye ya n'ebe ọ bụla ị chọrọ, dị ka Akpa, ụgbọ ala, akpa, ụlọ ọrụ na na, ukwuu maka njem ma ọ bụ n'ụlọ.
Onyinye kacha mma: Ngwa manicure na-abịa na nhazi ngwugwu mara mma.A na-eji akwa akwa na akpụkpọ anụ PU mee ihe ahụ, nke mara mma ma mara mma ma na-eme ka ọ bụrụ onyinye dị ukwuu.
Mgbochi ọnwụ: Akpa akpụkpọ anụ PU nwere ike ibugharị ma nwee ike imeghe ngwa ngwa site na iji otu bọtịnụ, nke nwere ike ichebe, chekwaa ngwaọrụ gị ma gbochie ha ịla n'iyi.
Ngwa Pedicure Tọọ ntu ntu Callus Remover Iberibe iri na abụọ
Gụnyere mkpịsị ụkwụ, ntu ntu, ntu ntu diagonal, mkpa ọtụtụ ebumnuche, cuticle trimmer, ntị ntị, mkpanaka ihu abụọ nwere ihu otu ọnụ, tweezer nku anya, mma peeling, faịlụ ntu, agịga isi ojii na ihe na-ewepụ akaghị, ihe ntupu nwere ụdị V. Mkpokọta.
ihe: mkpa, ntu nipper ntu faịlụ, v shape pusher, tweezer, peeling mma blackhead agịga na loop remover mere igwe anaghị agba nchara, 3pcs ntu clipper na earpick mere nke carbon ígwè, cuticle trimmer mere nke zinc-aluminom alloy.
12 pcs manicure pedicure kit na-abịa na igbe mara mma na nke mara mma iji kpuchido ngwa ndị dị nkọ, ọ dị mfe imechi ma ọ bụ mepee ya na mmechi ọnyà echekwara.